ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုငယ်ရွယ်သောပြည်နယ်သို့ ဦး နှောက်ကိုနှိုးဆွပေးသည်။ ရာခေလအန်းဘားမှပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသား၊ အာရုံကြောသိပ္ပံ၊ Université Laval (2019) - Your Brain On Porn
comments: ဆောင်းပါးအောက်မှာရာခေလအန်းဘားရ်က porn-induced ED နဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတိုးချဲ့ထားတယ် -
ကျွန်ုပ်၏တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်ကာလအတွင်းဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်ခေါင်းစဉ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့သည်။ ငါ andrology မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်များတဲ့ဆရာဝန်တွေအတွက်စာတွေရေးမယ်။ “ ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု” အတွက်ငါရိုက်ခဲ့တဲ့စာအရေအတွက်ကတကယ့်ကိုအံ့သြစရာပါပဲ။ ကုသမှုအစီအစဉ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအမြဲဖယ်ရှားပေးပြီးလူနာများစွာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်မှတ်တမ်းတင်ထားသောသမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်တည်ရှိပြီးအလယ်အလတ်သစ်တစ်ခုစီ၏နိဒါန်းဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ရာပေါင်းများစွာသောလိင်ဆိုင်ရာထင်ရှားသောနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများနှင့်ပန်းပုများကို Pompeii တောင်ရှိ Vesuvius အပြိုအပျက်များတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အင်တာနက်ပေါ်ပေါက်လာချိန် မှစ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများပြားလာသည်။ Pornhub သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး porn site ကိုရရှိခဲ့သည် 33.5 တစ် ဦး တည်းအတွင်းမှာပင် 2018 ဘီလီယံကျော် site ကိုလည်ပတ်မှုသည်.
သိပ္ပံပညာကသာထုတ်ဖော်ပြသဖို့စတင်နေပြီ porn စားသုံးမှု၏အာရုံကြောဂယက်ရိုက်။ သို့သော်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြည့်ရှုသူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘ ၀ များသည်ဆိုးကျိုးများခံစားနေရသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းမှ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအထိ porn သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကြောဝါယာကြိုးအားပြန်ပေးဆွဲနေပုံရသည် ဆိုးကျိုးများ.
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များ၏အခြေခံအာရုံကြောဝါယာကြိုးကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသည်။ ဗီဒီယိုညစ်ညမ်းမှု၏ဂုဏ်သတ္တိများသည်၎င်းကိုပလတ်စတစ်ဖြစ်စေရန်အစွမ်းထက်စေသောအရာဖြစ်ပြီး ဦး နှောက်၏အတွေ့အကြုံကြောင့် ပြောင်းလဲ၍ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုသုံးစွဲမှု၏အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့်အမည်ဝှက်ခြင်းတို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းလိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းသည်အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ပေးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုယခင်ကထက်ပိုမိုအားနည်းလာသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုကြည့်နေသောဘီဘီစီ3အစီအစဉ်။
ရေရှည်တွင် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အထူးသဖြင့်လက်တွေ့ဘ ၀ ပါတနာနှင့်အတူတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်ရရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်း။ အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေး နှင့် တ ဦး တည်းရဲ့ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်မှကတိကဝတ် ထို့အပြင်အားလျော့ခံရဖို့ပုံရသည်။
ဒီဆိုးကျိုးတွေကိုရှင်းပြဖို့အတွက်သိပ္ပံပညာရှင်အချို့ကအပြန်အလှန်နှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဒီဇိုင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်သည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကို dopamine များပြားလာခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်ရန်ကြိုးဖြစ်သည်။ အကျိုးရှိဆုံးမျှော်လင့်ချက်နှင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိသောဤ neurotransmitter သည်လည်းမှတ်ဥာဏ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကို ဦး နှောက်ထဲသို့ပရိုဂရမ်ရေးသားရန်လုပ်ဆောင်သည်။ ဒီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဆိုလိုတာကခန္ဓာကိုယ်ကအစားအစာ၊ လိင်လိုတစ်ခုခုလိုအပ်တဲ့အခါ ဦး နှောက်ဟာအပျော်အပါးတူညီဖို့ဘယ်နေရာကိုပြန်လာရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိနေတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုသို့မဟုတ်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအတွက်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်တစ် ဦး အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲမည့်အစားဆန္ဒပြင်းပြလာသောအခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်သူတို့၏ဖုန်းများနှင့်လက်တော့ပ်များသို့အလိုအလျောက်ရောက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်သဘာဝနှင့်မကျေနပ်သောပြင်းထန်သောဆုများနှင့်ပျော်မွေ့မှုပေါက်ကွဲခြင်းများသည် ဦး နှောက်တွင်သဘာဝအားဖြင့်ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စိတ်ပညာရှင် Norman Doidge ကဤသို့ရှင်းပြသည် -
စွဲစေသည့် ၀ တ္ထုများကဲ့သို့ porn မြင်ကွင်းများသည် ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအလွန်အစွမ်းထက်သောအစပျိုးခြင်းများဖြစ်သည် dopamine လျှို့ဝှက်ချက်၏သဘာဝမြင့်မား။ ၎င်းသည် dopamine ဆုလာဘ်စနစ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပြီးသဘာဝကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုအရင်းအမြစ်များကိုမတုံ့ပြန်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်နှိုးဆော်ခြင်းကိုစတင်ကြုံတွေ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ် circuit ကို desensitization ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ လေ့လာမှုများကပြသသည် dopamine ၏ဂီယာအတွက်အပြောင်းအလဲများကို စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူသဘောတူညီချက်မှာ ညစ်ညမ်းစားသုံးသူများသည်စိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာများ၊ ဘဝအရည်အသွေးနိမ့်ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပိုမိုဆိုးရွားခြင်းများကိုအစီရင်ခံကြသည် porn ကိုမကြည့်သောသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဤလေ့လာချက်မှအခြားဆွဲဆောင်မှုရှိသောတွေ့ရှိချက်မှာမလိုမုန်းထားသည့်ညစ်ညမ်းသောစားသုံးသူများသည်၎င်းတို့အားမနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလိုချင်ခြင်းနှင့်လိုအပ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ လိုချင်ခြင်းနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုတို့အကြားဤဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်မှုသည်ဆုလာဘ် circuitry dysregulation ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘာလင်ရှိမက်စ်ပန့်ခ်ျအင်စတီကျု့မှအလားတူစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရထိုပမာဏသည်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ရှားမှုနည်းသောဆက်စပ်မှုဖြစ်သည် သမားရိုးကျညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတုံ့ပြန်ခြင်း။ အသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောညစ်ညမ်းသောပုံစံများကိုဘွဲ့လွန်တက်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြသည်။
Pornhub မှလေ့လာဆန်းစစ်သူများကသမားရိုးကျလိင်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည် အသုံးပြုသူများကိုမှလျော့ကျလာစိတ်ဝင်စားဖို့ နှင့် incest နှင့်အကြမ်းဖက်မှုကဲ့သို့သော themes များဖြင့်အစားထိုးလျက်ရှိသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူများသည် ပိုမို၍ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုပိုမိုရွေးချယ်ကြသည်။ ဤသည်ပုံမှန်စားသုံးမှု၏ desensitizing အကျိုးသက်ရောက်မှုမှစွပ်စွဲနိုင်ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအွန်လိုင်းတွင်အစဉ်အမြဲရှိနေခြင်းသည်အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည် ရလဒ်အနေဖြင့်လက်တွေ့ဘ ၀ ဖြစ်ရပ်များပိုမိုများပြားလာနိုင်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်တချို့ကဒီဆက်နွယ်မှုကိုမှန်အာရုံခံဆဲလ်တွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုလို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဤ ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုလူတစ် ဦး ချင်းလုပ်ဆောင်မှုပြုသည့်အခါပစ်ခတ်ခြင်းအပြင်အခြားသူတစ် ဦး လုပ်ဆောင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်သူတို့ပစ်ခတ်သောကြောင့်အမည်သင့်လျော်စွာနာမည်ပေးထားသည်။
တစ်စုံတစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်နေစဉ်တက်ကြွသော ဦး နှောက်၏ဒေသများသည်လူကိုအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်တက်ကြွနေသော ဦး နှောက်၏ဒေသများဖြစ်သည်။ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှစိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာပါမောက္ခမာကိုအီကိုဘိုနီကအကြမ်းဖက်စနစ်များကိုပြန့်ပွားနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်ဟုခန့်မှန်းသည်ဦး နှောက်ထဲကမှန်ယန္တရားကကျွန်တော်တို့ကိုရိပ်မိတဲ့အရာကနေအလိုအလျောက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်လို့အကြံပြုပြီးအကြမ်းဖက်ပြုမူမှုရဲ့ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ neurobiological ယန္တရားကိုအဆိုပြုထားပါတယ်။"
ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်သော်လည်းညစ်ညမ်းမှု၊ မှန်ဘီလူးများနှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုသည်အန om တရာယ်ရှိသောသတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသုံးစွဲမှုသည်ကြည့်ရှုသူများအားအစွန်းရောက်သောအရာများသို့တွန်းပို့လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်အမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် အဆိုပါ prefrontal cortex ၏တိုက်စားမှု - ကိုယ်ကျင့်တရား၊ အင်အားနှင့်စွမ်းအားနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကဲ့သို့သောအလုပ်အမှုဆောင်များရှိသည့် ဦး နှောက်၏ဒေသ။
အပြုအမူ၌ဤဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏အခန်းကဏ္betterကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်၎င်းသည်ကလေးဘဝတွင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းနေသေးသည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ကလေးများသည်သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုထိန်းညှိရန်ရုန်းကန်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ လူကြီးအတွက် prefrontal cortex ပျက်စီးခြင်း hypofrontality ဟုချေါ အရာသည်တစ် ဦး ချင်းအားမဖြစ်မနေပြုမူ။ မကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များချစေနိုင်သည်.
အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ဝါယာကြိုးကိုငယ်ရွယ်သောပြည်နယ်သို့ပြန်ပြောင်းလိုက်ခြင်းသည်ဝိရောဓိဖြစ်နေသည်။ ပို၍ ကြီးမားသောအမြီးအမောက်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေမည်ဟုကတိပြုသော်လည်း၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပေးစွမ်းသည်။